China Acetonitrile Nrụpụta na Factory | Ugboro
CAS Mba: 75-05-8
Ahia: Europe / India
Ọdịdị: Piel mmiri mmiri
Ọcha: 99.9% min
Mmiri: 0.03% max
Agba (Pt-Co): 10 max
Acid Hydrocyanic (mg / n'arọ): 10max
Amonia (mg / n'arọ): 6max
150kg / drum, 12Mt / FCL ma ọ bụ 20mt / FCL
UN No.1648, Klas: 3, grouptù ngwugwu: II
Chemical analysis na ngwá ọrụ nyocha. Acetonitrile bụ onye na-agbanwe agbanwe na ihe mgbaze maka kromatography oyi akwa, akwụkwọ chromatography akwụkwọ, nyocha spectroscopic na polarographic na afọ ndị na-adịbeghị anya. Ebe ọ bụ na acetonitrile dị ọcha anaghị enweta ìhè ultraviolet na nso nke 200nm ruo 400nm, a na-emepe ya dị ka ihe mgbaze maka mmiri chromatography dị elu (HPLC) nwere mmetụta nke 10-9.
Acetonitrile bụ ihe mgbaze a na-ejikarị eme ihe, nke a na-ejikarị na distillation wepụ iji kewaa butadiene si C4 hydrocarbons. A na-ejikwa Acetonitrile maka nkewa nke hydrocarbons ndị ọzọ, dị ka nkewa nke propylene, isoprene na methylacetylene si fractions hydrocarbon. A na-ejikwa Acetonitrile maka ụfọdụ nkewa pụrụ iche, dị ka mmịpụta nke fatty acids si na mmanụ ihe oriri na mmanụ imeju, nke mere na mmanụ a gwọrọ bụ ọkụ, dị ọcha, ma na-esiwanye ísì ụtọ, ebe ọdịnaya vitamin na-agbanwe agbanwe. A na-ejikwa Acetonitrile eme ihe dị ka ihe mgbaze na ọgwụ, pesticide, textile na plastic ngalaba.
Medi Ngalaba nke ọgwụ sịntetik na pesticide.Acetonitrile nwere ike iji ya mee ihe n'etiti ọtụtụ ọgwụ na ọgwụ ahụhụ. Na ọgwụ, a na-eji ya agwakọta usoro nke ndị na-ahụ maka ọgwụ ọgwụ dị mkpa dị ka vitamin B1, metronidazole, ethambutol, aminopteridine, adenine na ụkwara olu diphenyl; na pesticides, ọ na-eji synthesize pyrethroid ụmụ ahụhụ, ethoxycarb na ndị ọzọ na pesticide intermediates.
EmSemiconductor dị ọcha. Acetonitrile bụ ihe na-emepụta ihe na polarity siri ike. Ọ nwere ezigbo solubility maka griiz, inorganic nnu, organic okwu na elu molekul onyinye. Ọ nwere ike ihicha abụba, wax, akara mkpịsị aka, ihe na-emebi emebi na ihe fọdụrụ na selọn. Ya mere, a pụrụ iji acetonitrile dị elu dị ka onye na-ehicha ihe na semiconductor. Ihe ndi ozo: Na mgbakwunye na ngwa ndị a dị n'elu, acetonitrile nwekwara ike iji ya dị ka ihe akụrụngwa maka njikọta njikọ, mmegharị ma ọ bụ ihe mgbakwunye nke ngwugwu ihe mgbagwoju anya. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ejikwa acetonitrile na akwa akwa na akwa mkpuchi, ọ bụkwa onye na-arụ ọrụ dị irè nke ihe mgbaze chlorinated
Company companylọ ọrụ ndị nwe obodo nwere ihe karịrị afọ 30;
Factory High HSE ọkọlọtọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe;
Ngwaahịa nke ndị ọkachamara ọgwụ na Europe kwadoro;
☑ Elektrọnik ọkwa dị
A-Anyị nwere usoro nlekọta njikwa zuru oke, na-ejedebeghị na nlele, usoro nyocha, nnweta nnweta, Usoro ọrụ arụmọrụ;
☑ Freemen ana achi achi Consisitency nke àgwà, na usoro siri ike nke management nke mgbanwe a na-eso, gụnyere usoro na akụrụngwa, akụrụngwa onunu, mbukota;
Ihe nlele nwere ike ibata n'aka gị n'ime ụbọchị iri abụọ maka ndị ahịa mba ụwa;
☑ Opekempe iji ibu dabere na otu ngwugwu;
☑ Anyị ga-aza ajụjụ gị na 24hours, ndị ọrụ aka ọrụ ga-agbaso ma dị njikere inye azịza ma ọ bụrụ na ị nwere arịrịọ ọ bụla;
Nabata kọntaktị maka nkọwa ndị ọzọ!
Nke gara aga: 1-Methylimidazole
Osote: 2,6-Diethyl-4-methylaniline (DEMA)
(R) -3-Aminobutanol, CAS 453-18-9, Amụma, C10-C14-tert-alkyl, CAS 3003-25-2, 2-Methyl resorcinol, CAS 608-25-3,